Taranja baolina lavalava Manana ny ho aviny Anosizato Andrefana
Manomana ny ho aviny ary tena manana tombony amin’ny filalaovana baolina lavalava ny tanoran’Anosizato Andrefana.
Mitohy hatrany ihany koa moa ny fanohanan’ny FFAM (Force féminine d’aide Mutuelle) ireo tanora misehatra amin’ny fanatanjahan-tena ao izay notarihin’ny filohan’ny fikambanana Rasolofonoroniaina Julia Mickaëlle na i Mishah. Tontosa tamin’ny Alahady 5 Janoary lasa teo ny lalao aram-pirahalahina izay nifanandrinan’ny Ekipa 2 tonta dia ny Selection Itasy sy ny Rugby Force Anosizato Miray tsy mifezaka (RFAM) izany. Tamin’izany dia nibata ny amboara tamin’ny isa 49 noho 7 ny RFAM tsy Mifezaka tao anatin’ity lalao ity. Tsiahivina fa efa fanaon’ny fikambanana FFAM hatrany no mikarakara hetsika ara-panatanjahantena am-pirahalahina tahaka itony. Tanjona ny fampiroboroboana ny tontolon’ny taranja baolina lavalava ao Anosizato Andrefana sy ny hifanakalozana traikefa eo amin’ny samy ekipa ho fanatsarana ny lenta sy ny fahaiza manaon’ny mpilalao. Hita taratra tao anatin’ity lalao aram-piralahiana ity fa tena manana ny ho aviny ny tanora Malagasy eo amin’ny taranja baolina lavalava ary rariny raha ampirisihina sy tohanana amin’ny lafiny rehetra hoy ny fikambanana ny FFAM hananana ho avy mamiratra.